NENTEW June 14, 2020 3 min read
Dad mudaharaadaya ayaa booliska ku shiiday quraarado mar ay gorrodda isku dareen magaalada London, halkaas oo ay kumanaan qof iskugu soo baxaaneen iyagoo dhegaha ka furaystay digniino loogu diidayo mudahraadkaas.
Kooxo dibad baxaya ayaa isugu soo ururay badhtamaha caasimadda iyagoo ku doodaya in ay taalooyinka ka ilaalinayaan dadka isir takoorka ka soo horjeeda ee iyaguna bannaan baxyada dhigaya.
Mudaharaadayaasha diidan isir takoorka ayaa iyaguna sidoo kale isugu soo baxay meelo kala duwan oo dalkaas ah oo xataa badhtamaha London ka mid tahay.
Booliska ayaa teed kala dhex dhigay dhawr kooxood oo doonayey in ay ka qayb galaan bannaan baxyadaa, maadaama oo todobaadkii hore bilowgiisii ay dhaceen rabshado dhex maray kooxahaasi.
Qabanqaabiyeyaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter ayaa dadka ku booriyey in aanay ka qab galin banaan baxyada dhici doona bilowga todobaadkan maadaama oo ay dhici karto in shaqaaqooyin ka dhex abuurmaan iyaga iyo kooxaha midigta fog.
Mudaharaadadaa midkood oo markii hore la qorsheeyey inuu Sabtida ka dhaco London ayaa maalin la sii qadimay.
Hase yeeshee dad kale oo dibad baxaya ayaa isugu soo ururay taalada dagaalka ee Cenotaph oo ku taal Whitehall, waxayna sidoo kale guudka uga baxeen taalada Winston Churchill ee ku taal barxadda Baarlamanka.
Kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa garabka midig, ayaa sheegay in ay iyaguna iskugu iman doonaan London si ay u ilaaliyaan taalooyinka taariikhda Ingiriiska.
Dadka mudaharaadka ka qayb galaya wax aka mid ah hogaamiyaha ururka midigta fog ee Britain First, Paul Golding, oo bishii hore lagu helay dambi aragagixisonimo ah, waxaanu yidhi waxaanu “u soo baxnay si aanu u ilaalino taalooyinkayaga”.
Taallada Churchill ayaa teed lagu wareejiyey si looga ilaaliyo dhaawac soo gaadhi kara, maadaama oo ay hore dad mudaharaadayey ugu tilmaameen inuu ahaa qof cunsuri ah.
Koox mudaharaadayaal ah oo farobadan ayaa teedkii la hor dhigay xafiiska ra’isal wasaaraha ee Downing Street iyo qaar kaleba qaaday oo booliskana shiiday.
Iyadoo sawirro laga soo qaaday mudaharaadada dhacaya ku baahinaysa bogga ay ku leedahay Twitter-ka, ayaa wasiirka arimaha gudaha Priti Patel waxay ku tilmaantay in ay yihiin “fadqalallo aan la aqbali karin”.
“Qof kasta oo ku kaca fal dambiyeed ama booba hanti waa inuu fishaa in sharcigu gacan adag ku qaban doono” ayay tidhi.
Didbaxyadan kuwo la mid ahi waxay ka dhaceen magaalooyinka kale ee Manchester, Cardiff, Leicester iyo Sheffield, waxaana ay xidhiidh la leeyihiin kuwa ka aloosan dalka Mareykanka iyo dunida dacalladeeda,kuwaa oo ka dhashay dilkii George Floyd ee bishii May ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Bannaanbaxyaashii London isagu soo baxay ayaa goobaha ay is -hor tubeen waxaa ka mid ahaa xafiiska Dawning Street ee ra’isalwasaaraha Britain iyo aqalka baarlamanka, iyagoo ku qaylinayey “caddaalad ma jirto, babad ma jirto iyo halku dhega caanka noqday ee Black lives matter oo la macno ah “nafta dadka madow qiimo ayay leedahay”.
Haddaba dibadbaxyadan UK ee la xidhiidha cunsuriyada maxay tahay fariinta ay dirayaan? Su’aashaas ayeynu waydiinay Cabdi Cumar oo ka faallooda siyaasadda dalka UK.
Image captionCabdi Cumar
Cabdi Cumar oo sii faahfaahinaya xiisaddan abuurantay ee iyo mudaharaadada socda ayaa yidhi:
” Tan kale ee wadankan ay u diraysaa waxa weeyaan wadankan laftigiisa caddaalad darro badan ayaa laga tirsadaa oo ay ka mid tahay dadka laga tirada badan, marka farriinta ugu weyn ee ay diraysaa waxa weeyaan hababkan dawladnimo ee ku dhisan caddaalad darada, middeeda kale waxay casharo u tahay wadamo badan oo ay iminka Afrika ha ahaadaan ama Carab ha ahaadaan iyo waddamada reer Yurub laftigooda in Dimuqraadiyada laftigeedu ay caddaalad darro keento, waxay keentaa dabaqado kala sareeya, waxay keentaa midab takoor marka farriimo badan ayaa halkaasi ku jira”
Previous Djibouti: Xisbiyada Somaliland oo ku kala aragti duwan kulanka Biixi iyo Farmaajo
Next Madaxweyne Geelle oo war rasmi ah kasoo saaray kulanka Farmaajo iyo Muuse Biixi